Qiimaha Nolosha Ukraine - Qiimaha, waxbarashada, hoyga, gaadiidka
Si aad u ogaatid qiimaha ku nool Ukraine waa tallaabo muhiim u ah dhammaan ardayda ajnabiga ah. Ukraine waa mid ka mid ah dalka ugu jaban Yurub in ay ka dhigaysa mid ka mid ah habka ugu fiican ee waxbarasho dibadda ee Europe. From article dhexdiisa waxaad ku baran doonaa oo ku saabsan qiimaha hoyga, gaadiidka, cuntada, maro iyo guud kharashka ku nool Ukraine. Sidoo kale waxaad ku baran doonaa dhowr ah Talooyin muhiim u ah ardayda foreing ee Ukraine. Xarunta Admission Yukreeniyaan falanqeeyay qiimaha ee Ukraine iyo hooba warkayagii:
Money iyo lacagta ee Ukraine
Ka hor inta aan hadalka bilaabin ku saabsan qiimaha, waxaan rabnaa in aan kuu sheego oo ku saabsan lacagta ee Ukraine.
lacagta Qaranka waa Yukreeniyaan Hryvnia (uah). 1 USD = 25 Hryvnia.
yar lacagta qaranka ee Ukraine si adag u burburay sano Aho. In kasta oo xaqiiqda ah in tani ay tahay dhibaato weyn dalka, waa faa'iido aad u weyn ee ardayda ajnabiga ah. Hadda waxaad ka heli kartaa in ka badan lacag la mid ah haddii aad qaaday dollars USD aad la.
Waxaad ma bixin kartaa in dollars ama lacag kale. hryvnia kaliya u ogolaanaya bixinta. Dhammaan lacagta qalaad lagu baddelan karo at bangiyada, xafiisyada sarrifka, tareenada iyo diyaaradaha. Tani maaha wax dhibaato ah. laamaha Bank yihiin aad caadi u ah. Waxaan ku talinaynaa in aadan isticmaalin xafiisyada sarrifka garoonka diyaaradaha. Heerka wanaagsan ugu badan ee laamaha bangiga ee.
Ku dhawaad ​​dhammaan jaamacadaha ee Ukraine ayaa hostels u gaar ah. ardayda International waxaa ku noolaan karaan. Qiimaha qol ee hostel noqon doonaa ka $ 40 USD in $ 100 USD. In badan oo ka mid ah xaaladaha aad ku nooshahay waxaa la doonaa 1 ama 2 degganahay.
Ardayda qaar door bidaan in guri kiro. Mararka qaarkood, hadii ay kiro guri dadyowga yar, waxay noqon kartaa faa'iido dheeraad ah.
kala duwan The qiimaha guryaha waa mid aad u sarreeya. Waxay ku xiran tahay magaalada, size oo ka mid ah aqalka iyo goobta (xarunta ama xaafad).
Waayo, examle, waxaad kiraysan kartaa 1 guri qol $ 100 USD ka fog xarunta iska. Ama xitaa in xarunta ee magaalooyinka yar yar.
3 qolalka guri aad ku kici doona $ 600 USD oo dheeraad ah. Qiimaha guri ku xiran tahay xaaladda dayactirka ah ee guri dabaq iyo alaabta guriga. Waxaan si adag ugu talinaynaa in ardayda sheeg joogitaanka alaabta guriga ka hor inta guri kiradiisa. Inta badan ardayda ku nool hostel iyo wax ka badan bixin $ 70 bishii. Kuwa guri ka kireeyey, sida caadiga ah wax ka badan bixin $ 150. Waxaa oo dhan waxay ku xiran tahay baahidaada.
The magaalooyinka ugu qaalisan yihiin Kyiv, Odessa. Little jaban yihiin Lviv, Kharkiv, Dnipropetrovsk.
magaalooyinka noocan oo kale ah sida Kherson, Mykolaiv, Poltava, Ivano-Frankivsk, Chernivtsi noqon doonaa jaban tahay magaalooyinka kor ku xusan.
Sidoo kale wax muhiim ah oo kharash. Sida caadiga ah, haddii aad ku nooshahay hostel jaamacad ee, waxa uu ku yaalaa meel u dhow oo aadan u baahan tahay in ay isticmaalaan gaadiidka si ay u gaaraan waxbarashada. Si kastaba ha ahaatee, aad doonaysid in aad qayb kale oo magaalada loo tago, si ay u tagaan in ay madadaalo ama u safraan dalka ku baahsan.
Gaadiidka ayaa sidoo kale waa mid aad u raqiis ah in Ukraine.
One-way tigidh in gaadiidka maxalliga ah (baska, taraamka, dhulka hoostiisa, gaariga-bus, iwm) aad ku kici doona $ 0.4 USD - $ 0.7 USD.
pass Bishiiba metro bilaabmin ka $ 8 USD in $ 12 USD (waxaa jira dhawr kala duwanaansho of pass).
Taxi aad ku kici doona $ 2 - $ 3 USD oo lagu daray $ 0.45 USD waayo, 1 km (bilaabmin ka 5-tii km)
baasiin (1 liter) aad ku kici doona $ 0.85 - $ 1.05 USD
Ukraine waa dal Deedna badan ee dhaqanka karinta. U hubso, haddii aad rabto, waxaad baran doontaa wax badan oo cuntada sida xiiso leh iyo dhadhan fiican. halkan, dad dhif ah ka dalban pizza iyo cunto si dhakhso ah guriga. Sida caadiga ah, ay iibsadaan alaabta suuqa ama dukaamada iyo kariyo at home themeselves. Waxaan dhiiri galiyo ardayda la mid ah sameeyo, waxaa aad dhaqaale iyo dheregto.
dadka maxalliga ah inta badan cunto u soo iibinno at suuqa. Waa arrin aad u habboon, laakiin waxaan ku talinaynaa ardayda ma inay sidaa sameeyaan si degdeg ah. Nasiib darro, aadan haysan khibrad ku filan deggan ee Ukraine, aad la khiyaameeyay karaa suuqa.
Waxaa fiican in la isticmaalo dukaamada tafaariiqda badan, halkan qiimaha ugu hooseeya ee adeeganayay fududdahay.
Inta badan dukaamada caan yihiin:
Waxaad la kulmi ah iyaga meel kasta.
OK, hadda oo ku saabsan qiimaha:
Milk (1 liter) - $ 0.5 - $ 0.9 USD
White Kibistii - $ 0.35 - $ 0.5 USD
ukunta digaagga (10) - $ 0.9 - $ 1 USD
baradho (1kg) - $ 0.4 - $ 1 USD (waxay ku xiran tahay waqtiga ee sannadka ka)
Biyaha (1.5 litir dhalada) - $ 0.3 - $ 0.5 USD
Dhalo oo khamri ah (0.5 liter) - $ 5 - $ 25 USD
Dhalada oo ah biirka (0.5 liter) - $ 0.4 - $ 1 USD.
sigaarka (Malboro) - $ 1 USD.
Waa tiro yar oo ka mid ah waxyaabaha, laakiin waxaan u maleynayaa in aad aragto, in qiimaha waa run ahaantii hooseeyo.
Dharka iyo kooxaha
Nuqdada lagu muransan yahay. Waxaan ma dhihi karo in dhar waa xaqiiqo ah oo raqiis ah. Annagu ma tixgeliyaan waxyaabaha qaali ah ku tilmaamay.
1 Labo Xidig ee Jeenis bilaabo ka $ 40 USD.
1 dharka Summer bilaabo ka $ 40 USD.
1 Labada ciyaaryahan ee kabaha bilaabo ka $ 20 USD. kabo wanaagsan orodka ma ka raqiisan yahay $ 100
kharashka Total ee ku nool Ukraine bishii
Dabcan, aynu wada ognahay in kharashka ku nool waxay ku xiran tahay qofka.
Qof yaase ku nool iyo ku dhowaad ma lacag on madadaalada qaataan, iyo qof mar walba tagaa u yaalaaan ugu moodada iyo xisbiyada.
Bal aynu eegno tirooyinkan. Mushaharka ugu yar ee Ukraine, sida waafaqsan sharciga, waa kaliya $ 62 USD. Mushaharka celcelis ahaan ku takhasusay IT ah - 325 USD ,shaqaalaha caafimaadka - $ 250, nin ayaa kaliya ku bilowday mustaqbalkiisa ciyaareed - 100-150 dollars.
Sidaas, Waxaad dareemi kartaa si raaxo leh, kharashka $ 200 bishii (oo ay ku jiraan qolka kirada ee hostel ah).
Haddii aad awoodi karto in ay qaataan $ 500 bishii, aad ku nooshahay karaa guri weyn, iibsato waxyaabo kala duwan oo inta badan oo xiiso leh.
Fadlan ogow: lacagta Jaamacadaha waxbarasho kuma jiraan in qiimaha this.